(SAWIRRO) Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo maamulka Galmudug ku wareejisay gaadiid ciidan | puntlandi.com
Wednesday, August 9th, 2017 | Posted by Pi
(SAWIRRO) Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo maamulka Galmudug ku wareejisay gaadiid ciidan
Gaalkacyo (Puntlandi.com) Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland, Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey, ayaa maanta maamulka Galmudug ku wareejiyay afar gaari oo ah gaadiidka ay ku shaqeeyaan ciidamada booliska.
Gaadiidkaan oo Midowga Yurub uu ku deeqay ayay dowladda Puntand kasoo qaaday dalka Jibuuti oo muddo labo sano ay ku xayirnaayeen, waxaana lagasoo dajiyay dekeda Bosaso, iyadoo Puntland ay dhaqaale badan ku bixisay inuu gaadiidkaan Galmudug soo gaaro.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabey, ayaa dowladda Puntland uga mahad celiyay inay masuuliyad iska saareen sidii gaadiidkaan Galmudug loogusoo qaadi lahaa. Waxaa uu sidoo kale uga mahad celiyay Puntland sida ay u garab taagan tahay tababarada ciidanka booliska Galmudug.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland, Camey, ayaa sheegay gaadiidkaan markii ay kasoo dajiyeen dekeda Bosaso inuu ka muuqday dayac xoogan, isagoo tilmaamay inay u dhameystireen dhammaan qalabkii ka qaraabay intii uu Jibuuti iska yiilay.
Xaflad gaadiidkaan lagu wareejinayay ayaa waxaa ka qeyb galay, labada madaxweyne ku xigeen, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Saacid, taliyaha ciidanka booliska Puntland, sareeyo guuto Cabdiqaadir Shirre Faarax (Ereg) iyo saraakiil ciidan oo labada dhinac ah.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, ayaa kula dardaarmay maamulka Galmudug in gaadiidkaan aan loo adeegsan wax ka baxsan in loogu shaqeeyo ammaanka Gaalkacyo, wuxuuna sheegay dowladda federalku inay si dhow ula socondoonto sida looga faa’idaysto gaadiidkaan.
Waxaa kale oo taliyuhu sheegay in Puntland loosoo wado afar gaari oo nuucaan ah oo dhawaan lagusoo wareejindoono, waxaana uu sheegay tilaabadaan inay qeyb ka tahay wada shaqaynta dowladda federalku laleedahay dowlad goboleedyada.
Halkaan ka dhegayso codka.